Kudya-kwekuzvimba chikafu: idya kudzivirira chirwere uye unzwe zvakanaka | Kudya kweNutri
Michael Serrano | | Chipo chekubhadhara
Iwe uri wakanyanya kuneta here kana kurwadziwa munguva pfupi yapfuura kupfuura zvakajairwa? Kuteedzera anti-kupisa chikafu kunogona kukubatsira kuti unzwe zvirinani. Uye ndiko kuti kuzvimba kungave kuri kukonzera dambudziko.
Kudya kunopesana nekuzvimba kunobatsirawo kuti udye zvirinanisezvo inoumbwa nemutsetse wetsika dzakanaka dzekudya. Ivo vanokuvimbisa iwe nezve zvakawanda zvinobatsira zvinovaka muviri uku uchichengeta izvo zvinogona kukuvadza, senge trans mafuta, aripo. Tsvaga kuti chii uye kuti ungachiite sei.
1 Chii chinonzi anti-kupisa chikafu?
2 Ndivanaani vari vanorwisa-kupisa chikafu?
3 Zvibvumirano zvinobvumidzwa
3.1 Zvibereko nemiriwo
3.2 Hutano mafuta
3.4 Mbeu dzese
3.9 Black chocolate
4.1 Kudya zvinyoronyoro
4.2 Zvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvine shuga
Chii chinonzi anti-kupisa chikafu?
Sezvo zita rayo rinoratidzira, iyi mhando yekudya iri chirongwa chekudya chinosanganisira chikafu chine anti-kupisa zvinhu. Kudya kune izvi zvivakwa kunofungidzirwa kudzikisa njodzi yekuvandudza zvirwere zvakawanda.
Pane zvikonzero zvakawanda zvekupa kudya kwako kurwisa-kuzvimba twist. Uye ndiko kuramba uchizvimba kungave kuri shure kwezvirwere zvakawanda. Tsvagiridzo yakabatanidza dambudziko iri negomarara, chirwere cheshuga uye Alzheimer's, pamwe nechirwere chemwoyo.
Ndivanaani vari vanorwisa-kupisa chikafu?
Zvirongwa zvekudya izvi kunyanya inokurudzirwa kune avo vanotambura nezvirwere zvinokonzeresa kuzvimba, senge rheumatoid arthritis. Kuita shanduko kuchikafu hakubvise dambudziko rekuzvimba, asi zvinofungidzirwa kuti zvinogona kudzikamisa zviratidzo zvaro, kungave nekudzora huwandu hwekupisa-kana kudzikira padanho remarwadzo.
Nekudaro, hazvidiwe kuti utambure nehusingaperi kuzvimba kuutevera, asi pane kudaro iyo inorwisa-kupisa chikafu inokodzera munhu wese. Uye inoonekwa seyakanyanya kudya sarudzo.
Chaizvoizvo, zvikafu zvinorwisa-kuzvimba zvinokurudzira kudya chikafu chizere pane chikafu chakagadziriswa. Asi ngatione zvakadzama zvese zvekudya zvinotenderwa uye ndeapi anorayirwa kudzivirira.
Zvizhinji zvekudya zvinofanirwa kunge zviri zvemapoka maviri aya. Bheja pamhando dzakasiyana kwazvo dzemavara. Mimwe mienzaniso maorenji, matomatisi, uye miriwo yakasvibira yemashizha senge sipinachi kana kare.
Inosanganisirwa mafuta ane hutano semafuta emuorivhi, avocado, walnuts, kana chia mbeu. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvinodikanwa kudzora huwandu hwezvikafu izvi nekuda kwekoriori yavo. Semuenzaniso, nzungu dzine mabhenefiti akati wandei, asi muganho unongova wakatsvuka pazuva. Zvikasadaro, mafuta uye macalorie zvinoungana, zvichiwedzera njodzi yekunyanyisa.
Kudya kwekurwisa-kupisa kunosanganisira hove kanokwana kaviri pasvondo. Salmon, tuna, uye sardines ndeimwe yehove dzakanakisa dzeichi chinangwa. Icho chikonzero ndechekuti ivo vakapfuma mu omega 3 fatty acids, iyo inorwisa kuzvimba.
Zviyo zvakanatswa zvinotsiviwa nezviyo zvakakwana, iyo, mukuwedzera pakuva ine hutano, inogona kubatsira nekuzvimba. Semuenzaniso, mupunga uye zvingwa zvezviyo zvakakwana zvinodyiwa panzvimbo pechena. Kune chikamu chayo, oatmeal chikafu chikuru chamangwanani.
Ivo ndeimwe yemidziyo yezvikafu zvine hutano, uye anti-kupisa hakuna izvo. Chikonzero ndechekuti izere nefibre uye inorwisa-kupisa zvinhu.
Raspberries, mabheribheri, kana bhurubheri anobatsira kurwisa kuzvimba. Chakavanzika chiri mune chinhu chinovapa iwo mavara avo.
Kana zvasvika pakunwa, chena tii uye green tiyi zvakakosha kucherechedzwa. Makapu mashoma pazuva aigona kurwisa kuzvimba nekutenda kune ayo polyphenols. Waini tsvuku inoonekwawo seinobatsira muzvishoma.
Turmeric, ginger, sinamoni, uye cayenne Iwo ari pakati pezvinonhuwira zvine anti-kupisa zvinhu. Garlic yaizobatsirawo kurwisa kuzvimba.
Nekuda kweanopokana-nekurwisa mhedzisiro yekocoa, chokoreti yakasviba inobvumirwa (mumwero).
Sezvo ivo vanogona kukonzeresa mhedzisiro inopesana neiyo yapfuura iwo (iwo anofambidzana nekuwedzera mukuzvimba) Kudya-kusagadzikana kudya hakubvumidze iwe kuti udye zvinotevera chikafu:
Trans mafuta anokwidza LDL kana yakaipa cholesterol, zvichikonzera kuzvimba. Ivo vanowanikwa mune zvekudya senge maindasitiri echingwa kana maFrance mafatata. Tarisa ivo pazvinyorwa pasi pezita rekuti hydrogenated maoiri. Mafuta akaguta, aripo mune zvekudya senge zvitsvuku uye zvakagadziriswa nyama kana pizza, anofanirwa zvakare kuve mashoma.
Kune rumwe rutivi, kunyanyisa kushandisa chikafu chakakangwa kunotungamira kune kufutisa uye kufutisa, pamwe nekuwedzera kuzvimba. Ngwarira uchishandisa mafuta mashoma kubika chikafu chako. Gadzirira ivo zvakabikwa, zvakabikwa kana kupiswa. Kana zvasvika kumafuta emukaka, iko kubheja pane 0 muzana mhando.
Zvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvine shuga
Mune anti-anogumbura kudya inokurudzirwa kudzivirira chero chinhu chakanyanya kugadziriswa kana shuga. Kuvashungurudza kunowedzera mukana wekuwedzeredza uye huwandu hweshuga uye cholesterol muropa. Uye ese eaya matambudziko ane hukama nekuzvimba. Zvinwiwa zvinotapira uye zvinwiwa zvinotapira mune zvakajairika muenzaniso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » Anti-anogumbura kudya